यही लकडाउनमा ९६ वर्षिय वृद्धले ८६ वर्षीय वृद्धासंग गरे धुमधामसंग विवाह (हेर्नुस् भिडियो) – Sandesh Press
May 17, 2021 587
त्यस्तै अहिले पछिलो समयमामा एउटा विवाहत जोडी खुवै भाइरल भइरहेको छ । यो जोडी भाइरल हुने कारण यो छ कि, उनीहरू दुवैजना वृद्ध वृद्धा हुन । कतिसम्म भने बेहुली ८४ वर्षकि वृद्धा हुन भने ९६ वर्षका वृद्धा हुन । त्यस्सैकारणले पनि यो जोडी खुवै भाइरल भएको छ् ।
यो जोडीको विहेको भिडियोलाई २४ घण्टामा मात्र १४ लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । त्यस्तै यसमा लाइक पनि १ लाख भन्दा बढी रहेको छ । हेर्दा र सुन्दा निकै नै अचम्म लाग्ने यो विवाह सम्भवत नेपालमा निकै नै कमी हुने गरेको छ । अब हेरौ उनै ८४ वर्षकि वृद्धा र ९६ वर्षका वृद्धले गरेको धुमधाम संगको विवाह
Prevआरजु देउवाले दिइन् अक्सिजन प्लान्ट खरिदका लागि १० लाख रुपैयाँ
Nextकस्ता व्यक्तिले कुन दिशामा शिर फर्काएर सुत्दा राम्रो ?
शौचालय जाँदा लडेर वडाध्यक्ष बस्यालको मृत्यु, परिवारमा रुवाबासी
सपना रोकायका कारण चर्चामा आएका विनयजंग बस्नेतले अन्तत गरे बिहे !
आँखै अगाडी डु’ब्यो काठमाडौंमा गाडी र घर – ७० लाख ब’र्बाद भो भन्दै रुदै मिडियामा हेर्नुस(भिडियो)